PP128 ၁၂၈ 88 ၁၀၈ 35±3
1.Paper Pulp ပန်းစိုက်အိုး Nursery Pot ပျိုးအိုး
2.Recyclable degradable ပန်းပျိုးခင်း အစေ့များပေါက်ရန်အတွက် စက္ကူပျော့ဖတ်အိုး
3.Hot sale ပျိုးခွက်ဥယျာဉ်အပင်ပျိုးခင်းစက္ကူအိုး biodegradable ပျိုးသစ်ဆွေးခွက်
4.Biodegradable ပျော့ဖတ်ပျိုးခွက်ဘေးကင်းသော horticultural ပန်းအိုး
5. စိတ်ကြိုက်တစ်ခါသုံးပျော့ဖတ်စက္ကူ mache ပန်းအိုးစိုက်ကိရိယာ
6. လက်ကားရောင်းချသော ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ပျော့ဖတ်ဗန်း ပျိုးပင် ပန်းမျိုးစေ့ စိုက်စက် အပင်များအတွက် စက္ကူသစ်ဆွေး စက္ကူပတ်ပတ်လည် ပျိုးပင်ဗန်း
7.Biodegradable peat pot စက္ကူပျော့ဖတ် ပျိုးဗန်း စိုက်အိုး ပန်းအိုး
8.100% biodegradable စက္ကူအပင်ခွက် ပျိုးဗန်း ပျိုးခင်းသစ်ဆွေးအိုး ၊
9.biodegradable transplanter ပျော့ဖတ် စက္ကူပန်းပွင့်သစ်ဆွေးအိုး ဗန်းပျိုးအိုးများ
၁)။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပက်ကေ့ချ်- ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံသွင်းထားသော ပျော့ဖတ်ထုတ်ကုန်များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ မြေဆွေး၊ 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဇီဝရုပ်ကြွင်းများ၊
2) ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်း- ကုန်ကြမ်းအားလုံးသည် သဘာဝဖိုက်ဘာအခြေခံ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။
3) စိတ်ကြိုက်အရောင်- အသုံးအများဆုံးအရောင်မှာ အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်နှင့် အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုချက်အရ မည်သည့်အရောင်ကိုမဆို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
4).အဆင့်မြင့်နည်းပညာ- ထုတ်ကုန်ကို မတူညီသော မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ဈေးနှုန်းပစ်မှတ်များရရှိရန် မတူညီသောနည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
5) ဒီဇိုင်းပုံသဏ္ဍာန်: ပုံစံများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
6) ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်- ရေ-ခံနိုင်ရည်, ဆီခံနိုင်ရည်နှင့် anti-static လုပ်နိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့သည် ရှော့ခ်ဆန့်ကျင်ပြီး အကာအကွယ်ပေးသည်။
7) အားသာချက်များ- ပုံသွင်းပျော့ဖတ်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းများသည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။EPS ထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။နိမ့်သောတပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်;ထုတ်ကုန်အများစုသည် အစုလိုက်အပုံလိုက်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် သိုလှောင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
8) လျှောက်လွှာဧရိယာများ- အီလက်ထရွန်းနစ်၊ အလှကုန်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလိုင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
9) စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းများကို အခြေခံ၍ အခမဲ့ ဒီဇိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်
ကုသိုလ်ကံ စက္ကူပျိုးခွက် ပျိုးအိုး စိုက်အိုး အထူ စိတ်ကြိုက်
အရောင် စိတ်ကြိုက်အရောင်ရရှိနိုင်သည်။ အသုံးပြုမှု အပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း။
MOQ 100000 pcs ရိုးရိုးနည်းပညာ- Wet Pressing/dry pressing/thermoformed
အင်္ဂါရပ် ဇီဝရုပ်ကြွင်း လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစား- ပျော့ဖတ်ပုံသွင်းခြင်း။
Eco Friendly Material: ကျန်းမာသောပျိုးပင်များအတွက် 100% သဘာဝနှင့် ဇီဝရုပ်ကွဲပျက်စီးနိုင်သော အော်ဂဲနစ်သစ်ဆွေးအိုးများ။Eco Friendly ကြီးထွားရန် နည်းလမ်း။
အင်္ဂါရပ်များ- ကိုယ်တိုင်စုပ်ယူနိုင်သော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ ဇီဝရုပ်ကွဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်သော၊ ပျိုးပင်များအတွက် သင့်လျော်သော သစ်ဆွေးအိုးများ၊ ပျိုးပင်များကို မထုတ်ဘဲ အိုးတစ်ခုလုံးကို စိုက်ပါ။
ပျိုးပင်များနှင့် အပင်များအတွက် သင့်လျော်သည်- သစ်ဆွေးအိုးအဝိုင်း4လက်မ အချင်း ပန်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ မိုးပျံအပင်များ၊ ပျိုးပင်စသည်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်သည်။
အစားထိုးမှု Shock ကာကွယ်ခြင်း- ပျိုးပင်ဗန်းများ၊ အမြစ်ဘောလုံးနှင့် ပေါင်းစည်းပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေခြင်းဖြင့်၊ ဤသစ်ဆွေးအိုးများသည် အမြစ်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲ အပင်များကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
ယခင်- ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေး၍ ပျက်စီးနိုင်သော ပျော့ဖတ် အရည်အသွေး ပန်းအိုး ရိုးရှင်းသော အသက်ရှူနိုင်သော အဝိုင်းအပင် ရေကန်
နောက်တစ်ခု: 130 မီလီမီတာ ကြီးမားသော Biodegradable အပင်အိုးများ
Biodegradable Paper Pulp ရေစိုခံ မျိုးစေ့ စတင်...
စိုက်စက်အတွက် ဆဲလ် 50 မျိုးစေ့ဗန်း
အနက်ရောင် ပလပ်စတစ် 32 ဆဲလ်အပေါက် ပျိုးဗန်း s...
105cells ပလပ်စတစ်စေ့နှိုးဗန်း အနက်ရောင် PET nu...